Madaxweyne Farmaaajo oo markii ugu horeysay soo hadal qaaday arinta Qalbi-Dhagax | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Madaxweyne Farmaaajo oo markii ugu horeysay soo hadal qaaday arinta Qalbi-Dhagax
Madaxweyne Farmaaajo oo markii ugu horeysay soo hadal qaaday arinta Qalbi-Dhagax
Kiiska Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo noqonaya mid ka mid ah caqabadihii ugu waaweynaa ee soo wajaha dowladda Soomaaliya muddadii sanadka aheyd, ayuu markii ugu horeysay soo hadal qaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Madaxweynaha oo su’aal arintaa la xiriirta la weydiiyay ayaa si taxadir leh ugu gaabsaday in kiiska arintan ku saabsan uu go’aan ka gaaray baarlamaanka Soomaaliya.
“Su’aashaasi runtii waa su’aal muhiim ah, waxaan ognahay in baarlamaanka ay ku sameeyeen dood, ayna kasoo saareen warbixin, ayna u codeeyeen, maxaa yeelay iyagu waxaa weeye, waa hay’adda ugu saraysa ee sharci dajinta, markay codeeyeene waxay gaareen go’aan, waxaan aaminsanahay in go’aankaasi uu yahay kama dambeys”.
Xusuusin go’aankii baarlamaanka uu ka qaatay arrinta Qalbi -Dhagax
Xukuumaddu ma ku qanacsan tahay go’aankii baarlamaanka
Ilaa iyo hadda ma jirto jawaab ka timid xukuumadda oo iyadu soo saartay go’aanka uu naqdiyay ama uu ka hor yimid baarlamaanka, kaddib markii ay u qiilsameysey go’aankii Qalbi-Dhagax loogu gacan galiyay dowladda Itoobiya, iyadoo dhinaca kalana ku tilmaamtay ONLF Urur Argagixiso.
Dowladda Soomaaliya ayaa sanadkii la soo dhaafay jahwareer badan kala kulantay dhiibiistii Cabdikariin Sheekh Qalbi dhagax oo ka mid ahaa Saraakiisha ugu sareysa Jamhadda ONLF ee kasoo horjeedda dowladda Itoobiya.